आकार र जनसंख्या मा देश विशाल
सबै दुनिया को राष्ट्रका आकार, जनसंख्या, धन, प्राकृतिक स्रोतहरू र यति मा धेरै भिन्न छन्। छ हाम्रो ग्रह, र सानो बौना देश, र विशाल शक्ति मा, वर्ग किलोमिटर लाखौं द्वारा क्षेत्र अनुमानित छन्। यस लेखमा सबै सूची क्षेत्रमा देश को दिग्गज र जनसंख्या। साथै, हामी सबै भन्दा रोचक र उत्सुक विवरण तिनीहरूलाई बारेमा संकलन गरेका छन्।
क्षेत्र द्वारा देश को सबै दिग्गज: सूची
भूगोल विभिन्न मापदण्डहरु मा दुनिया को सबै राज्य वर्गीकरण। क्षेत्र क्षेत्र कब्जा रूपमा एक कार्य। त्यसैले, अडान-देश Dwarfs, साना, साना, मध्यम, ठूलो, ठूलो अमेरिका, साथै विशाल देश को दुनिया मा। क्षेत्र द्वारा, तिनीहरूले सयौं र समय पनि हजारौं प्रत्येक अन्य फरक हुन सक्छ!
यो वर्गीकरण अनुसार, "विशाल" राज्य कुनै लाख3भन्दा कम मी2हुनुपर्छ। क्षेत्र द्वारा दुनिया मा सबै भन्दा ठूलो देश सूचीबद्ध तल:
तुलना, क्षेत्र र लागि सानो राज्य 0.44 मी 2, भेटिकन कवर जो - ग्रह।
यो देश क्षेत्र को दिग्गज अफ्रीका बाहेक संसारका सबै महादेशमा मा उपस्थित छन् भनेर याद रोचक छ (एक स्थायी बिना महादेशमा अन्टार्कटिक जनसंख्या - खातामा लिएको छैन)।
जनसंख्या विश्व को मामला मा सबै भन्दा ठूलो देश
राज्य एक विशाल expanse लिन्छ भने, यो मान्छे को एक विशाल संख्या छ बसोबास मतलब छैन। त्यसैले, उदाहरणका लागि, केवल 146 लाख मान्छे रूस बाँचिरहेका छौं। क्षेत्र मा एक देश रूस को भोलोग्डा क्षेत्र तुलना - त्यहाँ 10 लाख मान्छे बंगलादेश छन्।
के देशहरूमा जनसंख्याको सबैभन्दा घर छ? यो मापदण्ड मा नेताहरू हो:
चीन (1 373 लाख मान्छे।)।
भारत (1 282 लाख मान्छे।)।
अमेरिकी (323 मिलियन मान्छे।)।
इन्डोनेशिया (258 मिलियन मान्छे।)।
ब्राजील (203 mln।)।
खैर, भारत जनसंख्या एउटा भयावह दरमा बढ्दै छ। वैज्ञानिकहरूले 2050 द्वारा, यो छ कि भविष्यवाणी एशियाली देश माथि दर्जा नेतृत्व गर्नुपर्छ।
रूस - संसारमा सबै भन्दा ठूलो देश
रूस क्षेत्र द्वारा दुनिया मा सबै भन्दा ठूलो देश छ भन्ने तथ्यलाई बाहेक, यो पनि अन्य रेकर्ड को एक नम्बर छ:
रूस विश्वको सबैभन्दा ठूलो ताजा पानी रिजर्व दावा;
यो राज्य, संसारको बाह्य ऋण को आकार मा सबै भन्दा कम मा;
मात्र चीन युद्ध दोस्रो को कुल संख्या मा रूसी सेना;
सबैभन्दा प्रतिकृति अखबार पनि रूसी प्रकाशित छ - "Komsomolskaya Pravda," छ;
यो देशमा यो संसारमा जंगल मा सबै भन्दा ठूलो छ - साइबेरियन taiga;
रूस नाइट्रोजन मल को संसारको प्रमुख निर्यातक छ;
मास्को युरोप मा ऊंची भवन छ - एक टावर Ostankino ;
घरेलु - यो विशुद्ध रूसी पत्रुस महान् अन्तर्गत देखा जो "आविष्कार" छ।
चीन - विश्व मा सबै भन्दा populous देश
जनसंख्या मामलामा - चीन आकार मा संसारमा दोस्रो देश र पहिलो हो। र यहाँ यो पूर्वी राज्य बारेमा केही अचम्मको तथ्य हो:
संसारको सबैभन्दा प्राचीन सभ्यता देखा आधुनिक चीन को क्षेत्र मा;
चीन - आज संसारभरि धेरै उद्यान सजाउनु कि धेरै रंग को जन्म ठाउ;
यो देश मा कम्पास, आतिशबाजी, आइसक्रिम, क्रसबो र शौचालय कागज आविष्कार गरिएको छ;
धेरै अंग्रेजी फुटबल को संस्थापक छलफल, तर इतिहासकारहरूले चिनियाँ हाम्रो युग अघि क्षेत्र मा "बल लात मार" छन् प्रमाण फेला;
चीन मा शोक र दुःखकष्ट रंग सेतो हुन मानिन्छ;
संसारमा सबै भन्दा ठूलो बाँध चीन मा बनाइएको थियो।
देश दिग्गज भारी आकार को क्षेत्र मा फरक। आफ्नो क्षेत्रमा3लाख भन्दा बढी वर्ग किलोमिटर कब्जा गरिएको छ। यी संसारको सात राष्ट्रका समावेश: रूस, चीन, क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया र भारत।
आधुनिक संसारमा सबैभन्दा आबादी देशहरूमा बीच चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्डोनेसिया र ब्राजील प्रदान गर्न छ।
किर्गिस्तान: गणतन्त्र को राजधानी। बिश्कोक: इतिहास, वर्णन, फोटो
Stavropol कहाँ छ? Stavropol प्राप्त कसरी?
Alkenes लागि सामान्य सूत्र। गुण र alkenes को कैरेक्टराइजेशन
कति शब्दहरू प्रति मिनेट पढ्न गर्नुपर्छ पहिलो ग्रेड - मानक र आवश्यकताहरु
ताजा ककडी संग सलाद: खाना पकाउन विकल्पहरू
भान्सा सिंक VILLEROY र BOCH - संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
आत्माको "Givenchy Amaridzh": को स्वाद निर्माता र समीक्षा विवरण
के गर्न यदि तपाईं कार कर मा छैन आउँछन्?
"Aleksandra Nevskogo जीवन": पाठक गरेको डायरी सारांश
महिला मेष कसरी जीत? के मानिसहरू के गर्न आवश्यक?
स्मार्टफोन र ट्याब्लेट - कसरी गति गर्न "एन्ड्रोइड"? कार्यक्रम सिफारिसहरू
भिक्टोरिया यसलाई कप र बाल्टिन छैन संकलन गर्न लागि कसरी ख्याल गर्ने? साझेदारी रहस्य
"Stropuva" (बयलर): समीक्षा। ठोस इन्धन बयलर "Stropuva": मूल्यहरु
ओल्गा Belyavskaya। जीन निराशा अवस्थित छैन